» काँग्रेस महाधिवेशनः प्रदेश नं.१ का १४ जिल्लामा को–को छन् सभापतिका दाबेदार ? (हेर्नुहोस्)
काँग्रेस महाधिवेशनः प्रदेश नं.१ का १४ जिल्लामा को–को छन् सभापतिका दाबेदार ? (हेर्नुहोस्)
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै जिल्लाहरुमा पनि नेतृत्वको होडबाजी सुरु भएको छ । सोही क्रममा प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लामा सभापति पदका आकांक्षीहरु नेताहरुको विश्वास आर्जन गर्न र कार्यकर्ताहरुको मन जित्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् ।
काँग्रेसको जिल्ला सभापति पदका लागि पनि गुटगत प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । १३ औं महाधिवेशनको परिणाम हेर्दा प्रदेश १ का जिल्लाहरुमा पौडेल पक्ष हावी देखिन्छ । १३ औं अधिवेशनमा धनकुटा, मोरङ र ओखलढुङ्गाको जिल्ला सभापतिमा देउवा पक्षका नेता चुनिएका थिए भने बाँकी जिल्लामा देउवा इतर पक्षका सभापति चुनिए ।
तर यसपटक विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसमेत काँग्रेसमा समाहित भएको र राप्रपाबाट सुनिल थापासहितको समूह पनि काँग्रेसमा प्रवेश गरेका कारण समीकरण उल्टिने सम्भावना देखिन्छ । काँग्रेसमा सामेल भएका यी दुवै पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिन्छन् ।
कुन जिल्लामा को को छन् आकांक्षी ः
यस्तै, देउवा समूहबाट पूर्वसभापति केशव थापा र पूर्वकोषाध्यक्ष डम्बर खड्का आकांक्षी छन् । सहमतिका आधारमा सभापतिको चयन गर्ने प्रयासस्वरुप साउन ८ गते बैठक बोलाइएको छ ।
कर्माचार्यले कसैको नाममा सहमति भए छोड्ने तर प्रतिस्पर्धामा जानुपरे आफ्नो पनि उम्मेदवारी हुने बताएका छन् ।
जिल्ला सभापति पदका लागि खोटाङमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । १३ औं महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट नरेशकुमार श्रेष्ठले जिल्ला सभापतिमा बाजी मारेका थिए । उनी दोहोरिने मुडमा छन् ।
यस्तै पौडेल पक्षबाटै क्षेत्रीय सभापति तीर्थराज भट्टराईले पनि सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन् ।